Abalawuli boxinzelelo, ukuphindaphindeka kwegesi, ukufakwa kwePipe-Ewe
I-R11 yoLawulo lweNqanaba elinye loXinzelelo
I-R11 Series umlawuli woxinzelelo lwentsimbi engenasiphelo isisombululo esikwinqanaba elilodwa, isakhiwo sokucoca imveliso engenanto engenanto engenanto. It has uxinzelelo piston ukunciphisa isakhiwo, uxinzelelo iplagi rhoqo, ubukhulu becala esetyenziselwa uxinzelelo igalelo eliphezulu, ilungele igesi zicocekile, igesi standard, irhasi bako njl.
Umlawuli woXinzelelo oluPhezulu
Abalawuli boxinzelelo lwe-AFK banikezela ngokulandelela ngokupheleleyo kuwo onke amacandelo omatshini.
Singumvelisi wabalawuli boxinzelelo oluphezulu abanamava amakhulu
kwimveliso esemgangathweni kunye neeyunithi ze-bespoke
Uxinzelelo lweHIgh 4000psi Oxygen Medical Flow Gauge ...
Ubhedu olwenziwe ngeChrome ...
IArgon Co2 Nitrogen 200bar Brass Uxinzelelo lweRegula ...
I-Co2, iArgon, iNitrogen Pressu ...
250 psi Piston Brass Flow ephezulu yeNitrogen Pressur ...
Umdonga oMiselweyo Umgca omnye weSigaba 3000psi iNitroge ...
Imveliso yeParameenters: M ...
1 / 2inch Helium Adjustable Stage eyodwa Pre Pre ...
Iimpawu: 1.Single -stage ...
250psi 3/4, NPT Medium Flow uvalo SS ...
Phawu loyilo: 1.Single -...
Nitrogen CO2 Stainless Isixhobo Igesi Pre ...
Iindawo Main b izinto ...
316 Stainless Isilinda Dual Stage Pressur ...
Uxinzelelo oluninzi lokungena ...
I-Lab yoPhando lweGesi yoLwazi lweGesi yoLwazi lwaBabini ...
Phawu: 1.Uxinzelelo loLawulo ...
Uxinzelelo oluphantsi lwepaneli yesixokelelwano segesi seTheminali eyi-500psi
Iimpawu eziphambili: I-R1 ...
Uxinzelelo oluphezulu 3000 psi Switchover ngerhasi Manifold ...
Uxinzelelo lokufaka ...
WL300 200bar iimilo-oluzenzekelayo Utshintsho Gas Mani ...
Ukucaciswa kweMveliso 1) ...
Stainless 316 Isilinda Single Gas Panel M ...
Isicelo seMveliso Nguwe ...
Uqalise kakuhle njengomenzi wezinto ezilawulayo, ukuphindaphindeka kwegesi, ukufakwa kweepayipi, izivalo zebhola, iivelufa zenaliti, ukujonga iivevini kunye nezivalo ezizodwa. Injongo yethu kukubonelela ngokuthembekileyo, ngokuchanekileyo kunye nomgangatho ophezulu weemveliso kumthengi wethu…
UMar / 04/2021